thinzar's blog: around KL (2)
Labels: photos, places in Malaysia, posts in english
အခုတလော ရောက်ဖြစ်တဲ့ နေရာလေးတွေရယ် စားဖြစ်တဲ့ အစားအသောက်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ။ (အရင်တလောက ပုံတွေလည်း ပါတယ်။)
KLIA's view from LCCT and the cloud (1:3 - do i follow photography rule of thumb? But I think it becomes 1:1:2 roof, building, cloud :D)
KLIA's Low Cost Carrier Terminal (LCCT) - Feels like I'm at Yangon Airport :-)
Eye on Malaysia in Tasik Titiwangsa (Tasik = Lake). Just knew that this was rented for Visit Malaysia 2007 from Germany or something, and has been extended till Aug 2008. With Istana Budaya (National Theatre of Malaysia and KL Tower at the back).
Whichever angle I took, I still couldn't be able captureasatisfiable photo of this thing, even though I tried so hard to walk one round of Tasik Titiwangsa.
Captured during having an evening snack. Noticed this when we tried to check if there were any birds since we were eating at an open field. Flag + Trees + building + cloud = drew my attention to capture the moment.
If you are in Kuala Lumpur and you are missing roasted duck from Yangon, try this Roasted Duck Rice at Pavilion's Food Republic. (Don't forget to get some donuts from J.Co too, really worth queuing for it!!).
Jalan jalan cari makan... :-D
မရောက်တာကြာလို့ အလည်လာရင်း ဓာတ်ပုံတွေ လာကြည့်သွားပါတယ် ဗျို့. :)
14/7/08 6:22 PM
အဲဒီ roasted duck ဆိုင်က လူတွေအားလုံး မြန်မာတွေပဲ။
15/7/08 12:38 PM
najma, belanja i donut from j.co..hehe
16/7/08 2:35 PM
thinzar ရေ၊ camera ကို မရိုက်ခင် white balance နဲ့ aparature/exposure setting တွေကို ရိုက်ကွင်းနဲ့ ချိန်ပြီးမှ ရို်က်ရင် thinzar ရဲ့ photo တွေ ဒီထက် ပိုကောင်းမှာ သေချာတယ်။
white balance နဲ့ esposure settings တွေစမ်းသပ် လေ့လာကြည့်ပါလား။
ဆရာလုပ်ဒါ ဟုတ်ဘူးနော် တစ်မျိုးမထင်နဲ့
18/7/08 6:32 PM
THat shop worker is not only myanmar...some are Indonesia & Nepal .
19/7/08 6:59 PM
i m talking about roasted duck shop near Vietnam shop. Not all the shop in Pavillion :)
21/7/08 12:05 PM
Photoshop book. Great effects and photo retouching. http://www.box.net/shared/w5opzckkkw
21/7/08 1:39 PM
mhaw sayar>> ကြာကြာမှ တစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်တာကိုး။ :)
hafeeny>> sure.. jom.. =)
htetlin>> it's not strange to see myanmar/nepal/indonesian in any shop around KL, isn't it?
mmgamedev>> တကယ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို လာပြောရင်တော့ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေရာတကာလိုက်ပြီး ပြောနေရင်တော့...
22/7/08 2:23 PM
တစ်ကယ် တတ်တဲ့လူတစ်ယောက် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးတော့ အငြင်းမပွားချင်တော့ဘူး။ စေတနာနဲ့ ပြောတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် နောက်မပြောရုံပေါ့...
23/7/08 1:10 AM
sorry lar....ma tinzar
24/7/08 11:33 AM
sorry bar thinzar..
ကျွန်တော်က ပိုကောင်းစေချင်လို့ ပြောမိတာပါ၊ တမင် လိုက်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါနဲ့ thinzar ပြောလိုက်မှ ကျွန်တော်လည်း ရေးစရာ တစ်ခု အကြံရလိုက်လို့ အခု ရေးနေပြီ . . .
photo garphic နဲ့ cinematic lens တွေ အကြောင်းပါ...
ရေးပြီးရင် လာဖတ်နော် . . . အသုံးဝင်မှာပါ
25/7/08 11:23 AM